Friendbuy: Barnaamijyada Gudbinta, Raadinta Tixraaca, iyo Ugudbinta Ololaha Gudbinta | Martech Zone
Friendbuy: Barnaamijyada Gudbinta, Raadinta Tixraaca, iyo Dhiirrigelinta Ololaha Gudbinta
Arbacada, Juun 27, 2018 Jimco, Juun 29, 2018 Douglas Karr
Qof baa i weydiiyay caawa nidaamka biilasha ee aan isticmaalayo. Anigu waxaan ahaa isticmaale buugaagta Freshbooks muddo ku dhow toban sano waana jeclahay, markaa waxaan doonayay inaan arko haddii ay leeyihiin nooc kasta oo nidaamka gudbinta ah oo aan ku heli karo laba lacag ama bil bilaash ah ama wax kale. Hubaal in ku filan, markii aan galay koontadayda, waxay lahaayeen bog tixraac weyn oo ii oggolaaday inaan si toos ah qof ugu martiqaado emayl, aan ugu diro farriin Facebook Messenger, ama aan si guud ula wadaago barxadda Facebook:
Waxa ugufiican dhamaan, adoo iskuxiraya dhamaan, buugaagta cusub waxay si dhab ah ula socon karaan barnaamijka oo ay arki karaan sida ay wax uqabaneyso. In yar oo dheeraad ah oo aan sii qodo, waxaan arkay inay wax isticmaalayaan Saaxiibtinimo si ay u socodsiiyaan barnaamijkooda gudbinta.
Saaxiibtinimo waxay bixisaa mashiinka gudbinta ee'keykey 'ee nooc kasta oo ganacsi ah - ganacsiga elektaroonigga ah, goobaha rukunka, daabacayaasha majaladaha, ganacsiyada yaryar, SaaS, adigu waad magacawday. Ganacsiyadu waxay ka faa'iideysan karaan labadaba aalad la beddeli karo ama 'API' oo si buuxda u muuqata.
Friendbuy waa shey la yaab leh - way fududahay in la isticmaalo oo fudud in la dhexgalo. 6-dii bilood ee la soo dhaafay waxaan soo saarnay kor u kac dakhli 3.98% ah iyada oo loo marayo kanaalka Friendbuy. Waa wax aan laga fiirsan. Carlos Herrera, agaasimaha guud, Petnet
Waxyaabaha Barnaamijka Gudbinta ee Friendbuy ee Barnaamijka Soo-koobista waxaa ka mid ah:
Mawduucyada la beddeli karo - Wax-ka-bedel-fudud, qaab-dhismeedka widget-ka oo si qurux badan loo qaabeeyey waxay kordhinayaan ka-qaybgalka macaamiisha Qabashada xogta bulshada, naqshadeynta moobiilka iyo soo dejinta buuga cinwaanka ayaa lagu dhisay.
URL-yada shaqsiyadeed (PURLs) - Macaamiishaadu waxay la wadaagi karaan saaxiibbada shabakadaha bulshada ee ugu caansan, emayl ahaan iyo sidoo kale xiriir shakhsiyeed (PURL). PURLs waxaa lagu diri karaa farriin deg deg ah waxaana lagu dhajin karaa baloogyada.
Abaalmarinta otomaatiga - Si otomatik ah ugu soo dir tixraacaya emayl abaalmarin ah ama ku duub xeerarkaaga ganacsi adoo adeegsanaya API & webhooks-keena. Nidaamkeenna dabacsan ayaa kuu oggolaanaya inaad ku abaalmariso sida aad rabto haddii ay tahay amaahda dukaanka, lacagta ama dhibcaha daacadnimada.
War-saxaafadeed dhab ah - Wadaagista waqtiga dhabta ah iyo warbixinnada suuqgeynta gudbinta ayaa ku siinaya jaangooyooyin waxqabad illaa daqiiqad ah. Si gaar ah isha ugu hay baaritaankaaga A / B si aad u aragto soo bandhigyada, nuqulka iyo wicitaanada-ficilka ah ee kor u qaadaya qiyaasta barnaamijka gudbinta.
Tijaabinta A / B isku mar - Imtixaannada A / B waxay kaa caawinayaan inaad hagaajiso heerarka wadaagista iyo u-gudbinta gudbinta; Waxay ka saaraan mala-awaalka taas oo dalabyadu abuuri doonaan waxqabadka ugu badan ee saamileyda iyo asxaabtooda.
Bartilmaameedsiga Bartilmaameedka wuxuu ku siinayaa xitaa xakameyn sax ah barnaamijyada gudbintaada. Ku beddel ololahaaga iyo dalabyadaada qeybta macaamiisha, SKU ama lambarka tigidhada.
Waa kuwan tusaale kale oo weyn oo ah Barnaamijka Barnaamijka Gudbinta:
Bilaab tijaabo Bilaash ah
Tags: aasaaska laantaCarlos HerreraFacebooktixraac facebookFreshbookssaaxiibboyxayawaanka gurigatixraac-a-saaxiibbarnaamijka tixraacasoftware gudbinta
Maxay GDPR ugu Fiican Tahay Xayeysiinta Dijital ah
Taskade: Maareeye Hawleed-Waqti-Xaqiiqo ah oo leh Fiidiyow iyo Tifatira wada-shaqeyn ah